भोट तान्न मन्त्रीसँग मिलेर विमल ढकालको ब्ल्याकमेल ! – YesKathmandu.com
काठमाडौं । बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ अध्यक्ष पदका उम्मेद्धार बिमल ढकालले सिण्डिकेटका नाममा मतदाता ब्यवसायीहरुसँग ब्ल्याकमेल गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको निर्वाचन भोली ३० असारमा हुँदैछ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ढकालले मलेसियामा कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीहरुलाई सिण्डिकेटका नाममा ब्ल्याकमेल गरेको ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको अधिबेशन नजिक आइरहेका बेला मलेसियामा कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीहरुमा सिण्डिकेटको नयाँ खेल शुरु भएको छ ।
एफडब्लुसिएमएस मलेसियन सरकारद्धारा स्वीकृत प्राप्त संस्था हो । नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारका लागि स्वीकृति दिने काम गर्छ । यही संस्थाले बायोमेट्रिक नामक प्रणाली पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चाउचाउमा सिसाका टुक्रा बेच्ने कम्पनीलाई मात्र एक हजार जरिवाना !
वैशाखभित्र बजेट ल्याउने तयारी
केरुङदेखि काठमाडौ हुँदै लम्विनीसम्म रेलमार्ग बनाउन चीन सरकार सहमत